राधा पाण्ड्येका केही मुक्तकहरूः | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका राधा पाण्ड्येका केही मुक्तकहरूः – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
जसरी सधैँ यहाँ धर्तीलाई, आकासको भरोसा छ
उसैगरि मलाई सधैं त्यो, बतासको भरोसा छ
अरे यार ! नानाथरी नसोध भो, सिर्फ म बाँचेको छु
ऊ त्यही क्षितिजमा देखिने, प्रकाशको भरोसा छ ।
अनेकौं परिस्थिति कर्तव्यले गर्दै अङ्गीकार
धुन बदल्दै निस्कन्थे हृदयबाट ती झङ्कार
आखिर मुटु र मस्तिष्कको दुरी टाढा पो रहेछ
पटक पटक याद आइरहन्छ त्यै गिताको सार ।
जानेर पनि कसी लाउँछन् सुन, छुट्टाउन नम्बरी
हरेक मोड – मोडमा किन परिक्षामा पर्छे बुहारी
पुरुष मानसिकता पवित्र स्वतन्त्र हुनाले हो सधै
कोपिला फूल र पालुवालाई दिन्छ उमेदबारी ।
भोग्नुभोगियो यो जीवनमा अब के पो हुन बाँकी छ र !
हुनुहार जे-जे हुनु थियो भयो अब काँ रुन बाँकी छ र !
उडियो हिँडियो र घिस्रियो यै जीवनका उकाली अोराली
जीवनका तीन घुम्ती छामियो अब के छुन बाँकी छ र !
के हुँदैन र ! संकल्प गर्नसके, साकार हुन्छन् सपनाहरू
मनमा सल्बलाउनु पर्छ विषय, आकार हुन्छन् सपनाहरू
नसोचेकै देखिन्छ गजबको सपना, निद्रामा कहिलेकाहीँ
तर! अनिंदो आँखाले देखेका, प्रभावकार हुन्छन् सपनाहरू ।
समय यहाँ काँ फेरिन्छ र! जीवन ज्यूँने कला फेर्ने न हो
जुन ताल दिन्छ मादलले, त्यही गीतमा गला फेर्ने न हो
बद्लिने भन्दैमा प्वाँख घुसारेर, काग मयूर हुँदै हुँदैन
केबल मनरुपी घरका वैचारिक खाँबा -बला फेर्ने न हो ।।
This entry was posted in टुक्रे कविता, मुक्तक and tagged Pallawa, Pandey, Radha, पल्लव, राधा पाण्डे. Bookmark the permalink.
← सुमन सनम घिमिरे का केही मुक्तकहरूः